Ndezvipi Zvibatsiro zveChetifered Ethical Hacker (CEH) Certification
Kubatsirwa kwe CEH certification
Kuvandudza ruzivo rwako kune njodzi nekushaya simba
Ratidza kuti ungagadzirisa sei pfungwa yekufungidzira
Haisi chete inokosha yekupinda muchengeti
Kuwedzera Mari Yako Yekubhadhara ne CEH Certification
Tungamira Basa Rako
Iwe uchanzwisisa kuti ungashandisa sei zvigadzirwa zvokunyengedza kwechokwadi
Nzira yakanakisisa yekuita kuti CEH yako chiziviso chikurumidze
Ivai neChiratidzo cheEthical Hacker mu Just 5 Days
Gore rakapfuura inonyanya kushandiswa kwekombiki yepaiti webhusaiti, Beta News, yakataura pamusoro pekuti tsika dzekutengesa hutsika dzakange dzipi pakati pezvakanakisisa mukuchengeteka kwekuchengetedza. Nyaya yacho yakarondedzera chimiro pakati pezvipupuriro zvakapeteredzwa zvekuongorora kupinda, iyo Certified Ethical Hacker (CEH).
IECH ndiyo yaive iyo chiyeuchidzo chekuunza "mhepo yakasviba" kutengesa nzira kumapoka akazara evatariri veIt professionals; kupa ruzivo runotarisirwa kutaridzika zvakakodzera uye kugadzirisa nzira dzekunyora mabhizimisi.
Somugumisiro wekuzivikanwa kwechiratidzo ichi, nhamba huru yevashandi pasi pose vari kuronga kuzviita. Kana iwe uchifunga pamusoro peEEC pamwe chete, iwe uchada kuziva zvikomborero zvawakambopa mukana wako uye mari.
Izvi ndizvo zvikomborero zve CEH certification:
IECH inotsigira kubhadhara kwako
Dzorera basa rako rekuchengeteka
Muchikamu chino tichajekesa chimwe nechimwe chezvikonzero izvi. Verenga pamusoro pekuti mukati nekunze tora gander pazvikonzero nei uchifanira kuzadzisa chiziviso. Ndezvipi zvinonzi CEH zvinobatsira?
Cyber ​​mhosva ndeapi mapiyona uye acharamba achiwana nzira dzakanaka dzokurwisa hutachiona hweTI uye kushandisa zvisina kunaka.
Pasina ruzivo rwehungwaru uye udzvinyiriri hune chokuita nePC yako hurumende, iwe uchava nenguva inotambudza unoichengetedza yakachengeteka.
Nokunyanya kuisa pfungwa pamusangano weEECH, iwe uchaona kuti vatengesi vanoongorora sei hurongwa hwako kusarudza kana iwe uri chinangwa chekurwisa. Izvo zvinyorwa zvinyorwa mukati meEEC zvinokuratidzai nzira iyi, saka iwe unogona kushandisa mazano kune bhizinesi rako pachako:
Module 1: Nhepfenyuro yeMitemo yekutengesa
Module 2: Footprinting uye Reconnaissance
Module 3: Kuverenga Networks
Module 4: Kuverengera
Iyi nharaunda dzakanyatsodzika uye inogadzira nheyo yakasimba yekuona kuti kuvhiringidzika kunobatsira sei masangano pane zvezuva nezuva.
Kuzadzisa iyo CEH chiyeuchidzo inopa "chichena chena" IT vadzidzisi nekunzwisisa mune maonero evanhu vanoita zvepabonde.
Nekuita kurwisana nevanopomerwa mhosva nehutano kunosanganisira kupindura kune njodzi uye zviitiko sezvazvinenge zvichiitika, zvinonyanya kukosha kuona kuti vanopara mhosva idzi vanotungamira sei kurwisa kwavo uye maitiro emashoko.
Nokuona nzira yekuita nayo pfungwa yekufungidzira, iwe uchava nekwanisi yekutora nzira yakarongeka, uchitarisa mberi kwehutano hwako hwemazuva ano uye urongwa hwekutarisa nzvimbo dzingave dzisingabatsiri kurwisana nevanopomerwa.
The CEH chiyeuchidzo haisi chete yekupinda mucherechedzo. Izvi zvinogadziriswa zviyeuchidzo zvakanyatsokwanawo kwekuchengetedzwa kweT IT uye zvidzidzo zvevashandi.
Kana iwe uri maitiro ekugadzirisa unyanzvi, iwe une jeri rakakwana kuti usungirire kudzidza kwako kwekuchengetedza kwe cyber neEECH. Dzidziso yechokwadi yemazuva ano inorayiridzwa kuburikidza neEEC ichave yakakwana iwe neboka rako kuchengetedza hurongwa hwako kurwisana nemhosva dzekunyora.
Zvechokwadi, kunyange vakagadzirira IT kuchengetedza vashandi vachawana kukurudzira kubva pakuita CEH. Pamusana pekuti iwe wakatora chirongwa chisina kujairika chechirongwa chechirongwa, chakafanana ne (ISC) CISSP ye2, CEH ichabatanidza your commonsense system yekuchengetedza ruzivo - yakakwana kana yakabatanidzwa nehana uye maitiro ekutungamirira akashanda kuburikidza neCISSP.
Kuzadzisa mhizha-inozivikanwa chiyeuchidzo chinonyatsoratidza kuti iwe unokwanisa uye chinogona kuva chakakosha pachinenge chichinjira pakugadzirisa zvikamu zvitsva.
Iko inowanzobhadhara kune vadzidzisi vane CEH certification ndeye £ 55,000, sezvinoratidzwa nemashoko kubva kuTIJobsWatch. Izvi zvinowedzera ku £ 67,500 ne £ 87,000 yePenetration Tester uye Senior Penetration Tester parts mumwe nomumwe.
Pasi pemufananidzo inoratidza zvikwereti zvakajairika zveEEC-zvakagadziriswa vadzidzisi, kusungirwa kweTIJobsWatch.
Pamwe panjodzi yokuti iwe wakangotora simba rakagadziriswa muIt uye wakadzidza kuti mitambo inoshanda sei musangano (iwe ungangodaro wakagadzirisa CompTIA's A + uye Network + zvidzidzo, somuenzaniso) - CEH inogona kukupa nzira yekukura kwako njere mune IT kuchengeteka.
Pachinhu chakanaka kuti iwe uri munharaunda iyi uye unoda kupindira muchikamu chekubhadhara mukati mekuchengeteka kwekuchengetedza, funga kuita CEH iri pedyo neCompTIA's Security + certification. IECH ichagadzira kunzwisisa kwako mune zvishandiso uye zvishandiso zvinoshandiswa nevashambadzi, apo Chengetedzo + ichakupa nheyo yekudzidza kwekuchengetedza kweT IT.
Kunyange iwe ungave wakatsvaga kutsvaga mamwe mashizha ekugadzirisa kuti uwane ruzivo rwako (kana kuzadzikisa chido chako), hazvishamisi kuti wakadzidziswa mukati nekunze izvo zvinotarisirwa kushandisa uye kunzwisisa madhigi aya.
Chero zvazvingava, kuburikidza neHCH iwe uchanzwisisa kuti ungashandisa sei zvishandiso pachavo - hurumende dzepamutemo dzekudzidzira hutsika dzinowanzobatanidza kuwanika kwemaLAB chaiwo e140 uye zvinodarika zana raHNNX hacking.
Kuenzanisa kuti vadzivisi vanopikisa vanoshandisa sei matanho akasiyana-siyana vanoita kuti iwe uchengetedze zviri nani mitambo, maitiro, uye zvakasiyana siyana.
Gadzirira neInnovative Technology Zvigadziriswa pamusangano wekusimudzira hutsika hunosimudzirwa uye iwe uchawana chiziviso mumazuva 5 chete.